Hevitra mandalo Resaky ny mpitsimpona akotry : Kely sokatry | NewsMada
Hevitra mandalo Resaky ny mpitsimpona akotry : Kely sokatry
Any amoron’ny fetran’ny tanjany ny mpitandro filaminana any an-toerana, hany hery sisa dia ny fanatontosana ny fiarovana ny mpitsara mialokaloka ao amin’ny toby manoloana ny faharomotan’ireo mponina an-jatony any Ikongo.
Tsy anjaran’ny mpitazana no mitsara ny olana nahatonga izany trangan-javatra izany, nefa kosa azo eritreretina ihany fa diso noho ny fihoaram-pefy ary azo lazaina hoe nanota fady mihitsy ireo olona tonga nanafika sy nandrahona ny olom-panjakana antoky ny fihatran’ny lalàna. Ny herin’ny mpitandro filaminana sy ny fahefan’ny fitsarana no kitro ifaharan’ny fanjakana tsapa ho mahefa. Teo
amin’ireo sampana roa ireo anefa no notsapain’ny olona ny halalin’ny fahefany. Izany hoe tsy mahefa eraky ny firenena ve ny fanjakana ? Rehefa lavitr’iIavoloha ve dia samy mandidy araky ny heriny ka afaka manjakazaka toy izany ny olona tsirairay ? Kely sokatry ve ny rantsan’ny fanjakana ?
Nampiasa fitaovana avo lenta ny fitondrana, nandefa
« helikôptera » nakana an’ireo mpiasa-panjakana latsaka an-katerena tao anatin’ny savorovoro nisehoan’ny hetraketraka tafahoatra. Ny fahitana izany seho izany raha jery tokana dia manompotompo ihany fandosirana, ary ny fanirahana andiana mpitandro filaminana hanatevin-daharana an’ireo any an-toerana dia mitory fahasahiranana eo amin’
ny famerenana ny filaminana.
Manota sy meloka izay mikomy ! Fandaharana mipetraka tsy iadin-kevitra izay. Rehefa ekena izay, eo ankilany malalaka ihany ny zo ahafahana mametraka fanontaniana : « fa dia efa adala toy ny inona ary ireto vahoaka aman-jatony no miaramirongatra toy ny olona samy tratran’ny haromotona avokoa ? ». Tsy azo odian-tsy fantatra fa matoa miseho izany fahatezeran’olona marobe izany dia ao raha. Tsy afaka kianina fahatany moa ny fanjakana, raha niseho ny fahavotsavotsany tamin’ny tsy fahaizany nisoroka haingana ny fiitatry ny vay. Fery tsy nampoizina iny. Anisan’ny fahaizana mitondra anefa ny fitsinjovana sy fahatazanana mialoha ny sehon-javatra iray, indrindra fa ireo tsy ampoizina.
Amin’izao fotoana izao, efa tsapa fa malikiliky ny maro eo amin’ny mponina. Pitikafo kely fotsiny dia mety hampirehitra ny fiarahamonina. Ny fomba ahafahana mampiato ny fahasahiranana efa diso mianjady angamba no fanafody mety handaitra mba hitondra fitoniana toy ny fanondrahana an’ireo vain’afo mandoro ato amin’ny fiarahamonina.